Swipe Social: Ahụmịhe Onye Ntuziaka Maka Enyemaka Ego | Martech Zone
Ọtụtụ oge n'ịzụ ahịa, ọ bụ nnukwu omume ị gafere usoro ntụgharị, ịchọpụta usoro na omume ọ bụla, yana ịghọta ụdị azịza enwere ike itinye n'ọrụ iji merie ya. Maka ndị ọrụ ebere, ọ bụ njikọ n'etiti ọrụ ahụ na-arụ ọrụ yana oge na ọnọdụ nke onyinye ahụ.
Ihe ngwọta a sitere na Misereor, ndị Social slide, bụ ụzọ dị omimi iji dozie esemokwu abụọ dị iche:
Ndị mmadụ anaghị eburu ego ọzọ.
Igbe onyinye anaghị enye nghọta banyere ihe ejiri ego ahụ rụzuo.
Tinye Social Swipe. Vidiyo na emekorita ya na kaadị akwụmụgwọ swipe nke onye na-enye ego. Ka ha na-swi ma na-enye onyinye nri, a na-akpụ iberi achịcha. Ma ọ bụ ka ha na-amị aka ma nye onyinye iji lụsoo mgbere mmadụ, agbụ ejiri aka mmadụ aka. N'ezie azịza dị ịtụnanya.
Tags: onyinye ọrụ ebereọrụ ebereomume onyinyeonyinyenduhieelekọta mmadụ swipe